Fanaka baoritra ekolojika | Fanavaozana maintso
Fanaka baoritra ekolojika
Adriana | | Toekarena an-trano, Trano maintso
Ilaina amin'ny fanaka an-trano na birao ny fanaka, misy karazany, endrika ary fitaovana eny an-tsena.
Androany dia antenaina hampiasa ny olona Fitaovana ekolojika ao an-trano, hiaraha-miasa amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana ary tsy hankasitraka intsony ny fahasimban'ny tontolo iainana.
Amin'ity taonjato faha-21 ity dia manahy momba ny tontolo iainana isika, toa misy safidy ekolojika ampiasaina toa fanaka baoritra.
Seza, latabatra, seza, seza, talantalana, seza vita amin'ny baoritra avokoa. Misy teknika samihafa amin'ny fanamboarana fanaka baoritra.
Ny sasany mampiasa ny baoritra mitaona sy manao ny fanaka, ny sasany kosa mampiasa ilay baoritra matevina matevina ary avy eo manamboatra ireo fanaka samihafa.
Ny tombony azo amin'ireto fanaka ireto dia ny 100% azo ahodina, mora mihetsika, mamonjy habaka, mahazo aina, mahazaka ary mora vidy.
ireo fanaka ekolojika Izy ireo dia matanjaka ary manohana tsara ny lanjan'ny olona na zavatra hafa apetraka aminy rehefa ampiasaina izy ireo.
Misy karazana endrika, habe rehetra hisafidianana ilay iray izay tsy tianao indrindra na mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Izy ireo dia azo hosodoko mora volo sy haingo ary haingo mba hifanaraka amin'ny ambiny amin'ny fanaka na toerana anaovantsika azy ireo.
Ny ankamaroan'ny fizahana ny Madera izay ampiasaina hanamboarana fanaka dia avy amin'ny famokarana maharitra tsy tontolo iainana, noho izany ny fanaka baoritra dia safidy mahaliana. Ho fanampin'izany, avo ny vidiny na dia amin'ny ala tsy misy kalitao sy maharitra aza.
Ireo fanaka ireo dia vita amin'ny akora namboarina ary 100% biodegradable ary azo averina madiodio, noho izany dia fako izy ireo ary tena mora ahena.
Ny fanaka baoritra dia maoderina, azo ampiharina ary ambonin'izany rehetra ny tontolo iainana.
Saika ny firenena rehetra dia misy mpamorona sy mpanamboatra an'ity karazana fanaka ity satria lamaody izy ireo ary izy no vanguard farany amin'ny fanaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Fanaka baoritra ekolojika
shey dia hoy izy:
hevitra tena tsara hiezahako ny hanao izany
Valio i shey
Daniela valladares dia hoy izy:
Mila fanazavana aho
Valiny tamin'i Daniela Valladares
maria eckmann dia hoy izy:
tolak'andro tsara, aiza no hifandraisako aminao?
Mamaly an'i maria eckmann
Biriky hemp ekolojika
Ny trano hazo dia safidy ekolojika